ललितपुरमा आगलागी, एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु - Arunkhabar.com
ललितपुरमा आगलागी, एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु
प्रकाशित : २० कार्तिक २०७८, शनिबार ०६:२१
विराटनगर, २० कात्तिक । लतिलपुर पाटनको मंगलबजारमा आगलागी हुँदा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ । हिजो साँझ आगलागी हुँदा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी हरिबहादुर पालले बताउनुभयो ।
मृत्यु हुनेमा लक्ष्मीकृष्ण ताम्राकार, उनकी छोरी अञ्जना ताम्राकार, बुहारी रञ्जना ताम्राकार र नाती निर्जल ताम्राकार छन् । प्रहरी र स्थानीयले पाँच जनाको उद्दार गरेका छन् । दुई जनाको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको एआईजी पालले बताउनुभयो ।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी किरण बज्राचार्यका अनुसार घरको तेस्रो तलामा दियोबाट आगो सल्किएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । आगो बढ्दै गएर भान्छामा रहेको ग्यास सिलिण्डरसमेत पड्किएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
माईती नेपालद्धारा ८ जनालाई इरिक्सा र सिलाई मेसिन हस्तान्तरण
विराटनगरका कैलाशको जनस्वास्थ्य संघमा उम्मेदवारी
विराटनगर, १० भदौ । मोरङ जिल्लाभर एक साताका लागि निषेधाज्ञा गरिएको छ । यसअघि जिल्ला...
Extra Super Tadadel online, buy dapoxetine online. विराटनगर, १ पुस । विराटनगरलाई सफा बनाउने अभियान...